kalluumeysato Ajaanib ah oo lagu maxkamadeeyay Galmudug “Sawirro” – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA kalluumeysato Ajaanib ah oo lagu maxkamadeeyay Galmudug “Sawirro”
kalluumeysato Ajaanib ah oo lagu maxkamadeeyay Galmudug “Sawirro”
Maxkamadda gobolka Mudug ee dowlad goboleed Galmudug, ayaa ganaax mid 700 boqol oo doolar ah ku riday 31 ruux oo si sharci daro uga kalluumeysanayay Biyaha xeebaha u dhaxeeya magaalooyinka Xarardheere iyo Hobyo.
Sidoo kale waxaa lagala wareegay doontii iyo qalabkii ay wateen, kalluumeysatadaan ayaa kasoo jeeda dalka Yemen.
Guud ahaan dadkaan la qabtay ayaa ka koobnaa 39 ruux hase ahaatee sideed ka mid ah ayaa ah Caruur sida ay ku dhawaaqday Maxkamaddu.
Ciidamada amniga xeebaha Hobyo iyo Xarardheere ee Galmudug, ayaa sedex cesho ka hor gacanta ku dhigay kadib Howlgalo isdaba joog ah oo ay ka wadeen xeebaha Galmudug gaar ahaa Degmada Hobyo iyo deegannada ku dhaw dhaw.
Previous articleWasiirka Caafimaadka Somaliland oo Xadhiga ka Jaray Dhismeyaal cusub
Next articleBooliska Oromiya ayaa markii 2aad dib uxirey xubnihii OLF kadib markii maxkamada sare ee Oromiya sii deysay
warbixintii ugu danbeysay maanta covid19 Itoobiya,
“Rauters”: Imaaraadka Carabta ayaa hoos u dhigtay joogitaanka milatari ee Yaman...